नि: शुल्क चलचित्र स्ट्रीमिंग वेबसाइटहरू (२०२०) - साइन अप र डाउनलोड छैन - मनोरञ्जन
नि: शुल्क फिल्म स्ट्रिमिंग साइटहरू (२०२०) साइन अप र डाउनलोड बिना नै
तपाईं जस्ता सिनेफाइल सीमित ब्यान्डविथ को विचारमा फिल्महरू हेर्न मन पराउनुहुन्छ। कहिलेकाँही, युवा सिनेफिल्सलाई उनीहरूको मनपर्ने चलचित्रहरू हेर्न वेबसाइटमा सदस्यता लिन नगदको व्यवस्था गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसोभए ती दुविधाहरू हटाउनका लागि हामीले सब भन्दा राम्रो नि: शुल्क फिल्म स्ट्रिमिंग वेबसाइटको नामहरू जम्मा गरेका छौं।
नि: शुल्क चलचित्र स्ट्रिमिंग साइटहरू - चलचित्र अनलाइन हेर्दै
अनलाइन 'निःशुल्क चलचित्र' को सूची ती साइटहरूको साथ दिइन्छ जुन कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेपबाट सुरक्षित छ। साथै, यी साइटहरूले प्रयोगकर्ताहरूको लागि कानूनी अनुमतिहरू प्रदान गर्दछन्।
नि: शुल्क अनलाइन फिल्महरू हेर्नको लागि उत्तम साइटहरूको सूचीमा क्र्याकल हाम्रो प्राथमिकतामा सबैभन्दा माथि छ। क्र्याकल सोनी पिक्चर्सको स्वामित्वमा छ, त्यसैले एक प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईं पूर्ण-लम्बाइ चलचित्रहरू, भर्खरको टिभी श्रृंखलाहरूको रमाइलो लिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईं आगामी ब्लकबस्टरहरूको बारेमा 'आगमन सूचनाहरू' अप्ट इन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफुलाई प्रशस्त मात्रामा अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ फिल्म सम्बन्धित जानकारी। क्र्याकलले प्रयोगकर्ताहरूलाई केहि अद्भुत र दर्शनीय फिल्महरू हेर्न अनुमति दिन्छ जुन तपाईंको मोनिटर र स्क्रिनको जुन पनि आयाम उपलब्ध छ।
प्रयोगकर्ताहरूले क्र्याकलमा हेर्न सक्ने फिल्महरू:निवासी एविल, ग्राउन्डहग डे, द आईसम्यान, तेस्रो प्रकारको नजिकको भिडन्तहरू, शटर टापु, राशि, निजी रायन बचत गर्दै, बुगेइमान, निवासी ईविल र अधिक। त्यसोभए तपाईं यस वेबसाईटलाई स्वतन्त्र चलचित्र स्ट्रीमि sites साइटहरू छनौट गर्न आफ्नो प्राथमिकता चयनको शीर्षमा राख्न सक्नुहुनेछ।
Crackle एक कुशल मोबाइल फोन अनुप्रयोग हो।
प्रयोगकर्ताका लागि पर्याप्त मिडिया प्लेयर विकल्पहरू।
फिल्महरू हेर्नका लागि उच्च र वर्धित रिजोलुसन।
शीर्ष रेटेड र सर्वश्रेष्ठ फिल्महरू क्र्याकलमा उपलब्ध छन्।
प्रयोगकर्ताहरूले लामो समयको व्यावसायिक विज्ञापनको सामना गरे, जुन अनावश्यक मानिन्छ।
प्रयोगकर्ताहरू लोकप्रियतामा आधारित फिल्महरू क्रमबद्ध गर्न असमर्थ छन्।
पपकोर्नफ्लिक्स अर्को हृदयस्पर्शी नि: शुल्क अनलाइन फिल्म हेर्ने वेबसाइटहरू हुन् जुन समृद्ध भएका छन् नयाँ सबै नयाँ र नयाँ चलचित्र रिलिजहरू। स्क्रिन मिडिया वेंचरहरूको आफ्नै पपकोर्नफ्लिक्स वेबसाइटहरू। यो एक अभूतपूर्व वेबसाइट हो जुन तपाईं जस्तो फिल्म बफरहरूलाई आश्वासन दिन्छ कि नाटक, डरावनी, कार्य, रोमान्स, र परिवार जस्ता फिल्महरू हेर्न धेरै विधाको शैलीको आनन्द उठाउन। यस वेबसाइटको सब भन्दा अनौंठो विशेषता भनेको यो हो कि तपाईले खाता बनाउनका लागि कुनै पनि प्रकारको बोझ लिनु पर्दैन - केवल प्ले बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र पपकोर्नफ्लिक्समा उपलब्ध उत्तम चलचित्रहरू हेर्न रमाईलो गर्नुहोस्।
स्क्रीन मिडिया भेन्चरहरू एक व्यक्तिलाई उत्तम नि: शुल्क अनलाइन फिल्म वेबसाइटहरू प्रदान गर्दछ, जो पूर्ण-समय चलचित्रहरू हेर्न मन पराउँछन्।
तपाईं स्क्रीनबाट GIFs अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ।
फिल्म बुफको जस्तो तपाईं फिल्मको विशेष भागहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, जब तपाईं यसलाई अनलाईनमा प्ले गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं जस्ता प्रयोगकर्ताहरूले यस वेबसाइटमा फिल्महरू प्ले गर्दा उत्तम भिडियो प्लेयरको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
बच्चाहरूको लागि अधिक उपयुक्त।
स्क्रिनमा प्रदर्शन गर्नको लागि उपशीर्षकहरूको पहुँच छैन।
अधिक सुधारिएको र विस्तारित भिडियो प्लेयर प्रयोगकर्ताहरूको लागि आधारभूत आवश्यकता हो।
Yidio उत्तम अनुकूलित नि: शुल्क फिल्महरू अनलाइन वेबसाइट हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्तम चलचित्रहरू अनलाइन आनन्द लिनको लागि सुपर सजिलो पहुँच दिन्छ। Yidio अधिक विशेष रूपमा 'नि: शुल्क चलचित्र खोजी इञ्जिन' को रूपमा दर्साउन सकिन्छ, यसले तपाईंलाई अनलाइन फिल्महरू हेर्नका लागि नि: शुल्क वेबसाइटहरूको बारेमा जान्न मद्दत गर्दछ।
Yidio चलचित्रहरूमा मूल्या्कन विशिष्ट प्रतीकको रूपमा गरिन्छ जस्तै R, G, र PG-13 साथै विधाको रूपमा। त्यसोभए कुन युनिक विधाहरू जुन तपाई Yidio मा हेर्न सक्नुहुन्छ ?? एनिमेशन, संगीत, विशेष चासो, ईन्डी, सस्पेंस, शास्त्रीय, पश्चिमी चलचित्र र वृत्तचित्र र टिभी चलचित्रहरू।
चलचित्रहरू जुन तपाई Yidio मा हेर्न सक्नुहुन्छ:फेमे फटाले, निलो सबैभन्दा तातो र color्ग छ, चास, टर्मिनेटर, तीन, डगटेअर्स, र गोल्डन अण्डाको संरक्षक।
यसैले यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ कि यिडिओ, एक तर्फ, यिडियोले तपाई जस्तो सिनेफाइलहरूका लागि सेवाहरूको विस्तृत श्रृंखलालाई नि: शुल्क चलचित्रहरूमा विशाल पहुँच दिएर समाहित गर्दछ। तर अर्कोतर्फ, Yidio गलत प्रयोगकर्तालाई गलत र अप्रत्यक्ष लि of्कहरूको पर्याप्त मात्रा प्रदान गरेर प्रयोगकर्ताको लागि गलत व्याख्या गर्न अनुमति दिन्छ।
फिल्महरू सडेको टमाटर स्कोरको आधारमा समीक्षा गरिन्छ।
चलचित्रको क्रमबद्ध गर्न 'लोकप्रियता' र 'हालसालै थपेको' गर्न सकिन्छ।
तपाईं MPAA रेटिंगमा आधारित फिल्महरू फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ।
Yidio नि: शुल्क चलचित्रहरूको लागि उत्कृष्ट खोज विकल्प प्रदान गर्दछ।
सीमित संख्यामा चलचित्रहरूले हेर्न स्वतन्त्र पहुँच पाएका छन्।
Yidio अप्रत्यक्ष लिंक को एक प्रशस्तता शामिल।
चित्रको गुणस्तर त्यति राम्रो छैन।
भिडियोहरू लामो समयको लागि व्यावसायिक विज्ञापनहरू द्वारा अवरुद्ध हुन्छन्।
यूट्यूबमा नि: शुल्क अनलाइन स्ट्रिमि movies चलचित्रहरू छन् जुन यूट्यूबका चलचित्रहरू र कार्यक्रमहरूबाट सजीलो पहुँच योग्य हुन्छ YouTube यात्रु कुकुरको स्केटबोर्डि to सम्बन्धित ट्रेलरहरू र भिडियोहरू हेर्न मात्र समर्पित छैन तर यो फिल्मका साथ बृद्धि गरिएको छ जुन तपाईं निःशुल्क रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
जे होस्, मुख्य समस्या यो हो कि तपाईंले YouTube को नि: शुल्क अनलाइन चलचित्र स्ट्रिमि section सेक्सनमा कुनै नयाँ फिल्महरू प्राप्त गर्नुहुने छैन। YouTube मा उपलब्ध चलचित्रहरू धेरै पुरानो छ। हाम्रो अन्तिम युट्यूब सर्वेक्षणमा, हामीले यो देख्यौं कि मिसिंग 11११, ए स्ट्रिट क्याट नेम बब, साल्भेसन, डेभिल वायुहरू, र अधिक धेरै जस्ता चलचित्रहरू युट्यूबमा उपलब्ध छन्।
समग्रमा युट्यूब नि: शुल्क चलचित्र वेबसाइटहरू पहुँच गर्न सबैभन्दा उपलब्ध र सजिलो तरीकाका रूपमा मान्न सकिन्छ तर समयको साथमा, यसले ब्याकलगहरू र बेफाइदा पनि पायो।
तपाईंलाई युट्यूबमा नि: शुल्क चलचित्र हेरेपछि सेक्सन स्तम्भमा तपाईंको प्रतिक्रिया प्रदान गर्न अनुमति दिइन्छ।
तपाईं विभिन्न प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सबै भन्दा राम्रो मूल्या rated्कन गरिएका नि: शुल्क चलचित्रहरू हेर्न सक्नुहुनेछ।
केही नि: शुल्क कागजातहरू र चलचित्रहरू YouTube द्वारा नै होस्ट गरिन्छ।
पछिल्ला चलचित्रहरू YouTube मा प्राय: उपलब्ध हुँदैनन्।
नि: शुल्क चलचित्रसँग प्रदर्शन गुणवत्ताको HD संस्करणहरू छैनन्।
कुनै पनि समयमा कुनै पनि समयमा चलचित्रहरू तल झिक्न सकिन्छ पूर्व व्यक्तिलाई सूचना दिए बिना नै अपलोड गर्ने व्यक्ति।
सिनेफाइलहरूले आफुलाई स्न्यागफिल्म्स भनिने उत्तम अनलाइन नि: शुल्क चलचित्रहरूको अनुभव लिनका लागि नयाँ गन्तव्य पाएका छन्। स्न्यागफिल्ममा २००० भन्दा बढी प्लस फिल्म, वृत्तचित्र र वेब श्रृंखला हुन्छ। सिनेफिल्स्ले उत्तम सम्पादकको छनौट, प्रयोगकर्ता क्युरेट विधा, र अन्य धेरै विकल्पहरू जुन Snagfilms एक अद्वितीय निःशुल्क चलचित्र स्ट्रिमि website वेबसाइट बनाउँछ मा आधारित चलचित्रहरूको एक पर्याप्त संख्या हेर्न सक्दछ।
स्न्यागफिल्म्सले हालसालै आफ्नो चलचित्र संग्रह प्रोफाइल अपडेट गरेको छ र स्न्यागफिल्म्सको नयाँ संस्करणमा मिस्टर क्रिसमस, फिल्महरू खेलौना, मेडिया, वेटरन्स, र सैन्य जस्ता फिल्महरू हुन्छन्, उनीहरू क्रिसमस र अन्य धेरै चलचित्रहरू भन्दा पहिले।
Snagfilms कुनै निश्चित समय अवधि को कुनै पनि प्रकारको बिना दृश्यमा निःशुल्क पहुँच प्रदान गर्दछ। त्यसोभए कुनै पनि प्रकारको नामांकन शुल्क तिर्ने बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन र तपाईं कुनै पनि प्रकारको अवरोधहरू बिना उत्तम पूर्ण-समय चलचित्रको आनन्द लिनुहुनेछ।
स्न्याग फिल्महरूले बच्चाहरूका लागि राम्रो र शिक्षा फिल्महरू पनि प्रदान गर्दछ र यसले निःशुल्क डाउनलोड मापदण्डलाई अनुमति दिन्छ। तपाईं फेसबुक र गुगल प्लस खाताहरूबाट स्न्यागफिल्म्समा साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ।
व्यावसायिक विज्ञापनको सन्दर्भमा त्यस्तो अवरोधहरू होईन।
धेरै अनुप्रयोग र उपकरणहरूको लागि पहुँचयोग्य।
चलचित्र व्यवस्थित ढ different्गमा विभिन्न विधा र संग्रहमा व्यवस्थित छन्।
चलचित्रहरूका लागि उपशीर्षकहरू छैनन्।
द्रुत अगाडि बफरिले लामो समय लिन्छ।
चलचित्रहरूको लागि कुनै रेटिंग उपलब्ध छैन।
मान्छेहरू कम प्रदर्शनको बारेमा कम सजग छन् जुन भूडुले सिनेफाइलहरूको जीवनमा खेल्दछ। भडुमा विभिन्न वर्गमा वर्गीकृत एक हजार भन्दा बढी फिल्महरू छन्। Vudu सित्तै चलचित्रहरू समावेश गर्दछ जुन p 1080० पिक्सेलसहित समृद्ध हुन्छ, त्यसैले चलचित्रका दुर्व्यसनी व्यक्तिहरूले फिल्मको तस्वीरको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्दैन, तपाई नि: शुल्क सदस्यता लिनु भएको बेला पनि।
Vudu वेबसाइटमा नि: शुल्क चलचित्रहरूको लागि अप्ट इन गर्नको लागि तपाइँ यस फोरममा उपलब्ध नि: शुल्क चलचित्रहरू हेर्न Vudu को नयाँ पृष्ठ साइटमा सिधा जान जरूरी छ। त्यहाँ प्रशस्त छ विधा जुन विशेष रूपमा अपराध र सस्पेन्स, प्रेरणा र विश्वास, कार्य, बच्चाहरू र परिवार, रोमान्स, र कमेडीमा वर्गीकृत गरिएको छ।
Vudu मा, एक पटक तपाईं एक चलचित्र हेर्न अभ्यस्त हुन्छ, तपाईंलाई भाँडामा लिन वा फिल्म किन्न आग्रह गर्न सकिन्छ। तपाईं यसलाई फ्रि बटनमा क्लिक गरेर बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ जब मुक्त वा भाँडा सम्वाद बाकस स्क्रीनमा देखा पर्दछ। यदि तपाइँ Vudu को सदस्यता लिन चाहानुहुन्छ भने चलचित्रहरूको लागि भुक्तान विकल्प छान्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्।
1080 HD मा फिल्महरूको संख्या।
प्रयोगकर्ताको छनौट अनुसार फिल्महरू अलग गर्नका लागि अनुकूलन योग्य विकल्पहरू।
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने तपाइँ Vudu बाट फिल्महरू किन्न र भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ।
सबै चलचित्रहरूमा विज्ञापन।
सबै चलचित्रहरू हेर्नका लागि तपाईलाई स्वतन्त्र हुँदैन, केहि चलचित्रहरूलाई सदस्यता चाहिन्छ।
लगईन र नामांकन आवश्यक छ।
The. रोकू च्यानल
रोकु च्यानल नि: शुल्क अनलाइन स्ट्रिमि movies चलचित्रहरू हेर्नका लागि सेवा प्रदायक पनि हो। तपाईं बस आफ्नो स्मार्टफोनमा रोकू च्यानल स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको अत्यन्त आराम र सजिलोमा नि: शुल्कका लागि चलचित्रहरू हेर्न रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ। रोकू च्यानलले तपाई जस्तो सिनेफाइलहरूलाई केही अचम्मका सिनेमाहरू हेर्नको लागि विकल्पहरूको प्रशस्तता पाउन अनुमति दिन्छ जस्तै उत्कृष्ट ब्रिटिश टिभी, नेटफ्लिक्स शीर्ष-रेटेड एपिसोडहरू, र ऑस्कर-मनोनीत फिल्महरू।
हो, यो हाम्रो लागि उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि चलचित्रहरू बीचमा व्यावसायिक अवरोधहरू छन् तर यो १० सेकेन्डको लागि काउन्टडाउनको साथ उपलब्ध छ।
फिल्महरू क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ र पर्याप्त संख्यामा अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
टिभी कार्यक्रमहरू उपलब्ध छन्।
प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नै इच्छामा प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसलाई अनुकूलित गर्न सक्दछन्।
क्याप्शनहरू उपलब्ध छन्।
उपशीर्षकहरू विभिन्न भाषाहरूका लागि उपलब्ध छन्।
वाणिज्य विज्ञापन शामिल।
अमेरिकी दर्शकहरूको लागि मात्र पहुँच योग्य।
मोबाइल फोनमा पहुँच छैन।
प्रयोगकर्ता खाता आवाश्यक हुन्छ।
केहि अधिक योग्य फिल्म स्ट्रीमिंग साइटहरू (सशुल्क र मुक्त)
अमेजन प्राइम भिडियो
सीबीएस सबै पहुँच
कहीं पनि शोटाईम
जी5(भारतमा)
1movies र अधिक ..!
चलचित्रहरू जुन तपाईं रोकू टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ: मेमेन्टो, हाइलैंडर, जसले क्रिसमस, ह्युगो, त्रिकोण, अगस्ट रश, र अधिक बचाए। लपेट्नुहोस्, साथीहरू .. !! यदि तपाईंलाई नि: शुल्क आफ्नो मनपर्ने चलचित्र खोज्न समस्या भइरहेको छ भने तपाईं भाडामा नि: शुल्क डीवीडीहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन रेडबक्सबाट सबै नयाँ र भर्खरका चलचित्रहरू समावेश गर्दछ।
अनलाइन फिल्म हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क टिभी कार्यक्रम स्ट्रिमि streaming साइटहरू
तपाइँ नि: शुल्क नेटफ्लिक्स कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ
त्यसैले म h किसानाइम खेल्न सक्दिन
स्कूलमा minecraft डाउनलोड अनब्लक